Sajhasabal.com | Homeओबामा-हिलेरी सहित ७ डेमोक्रेट नेताहरुलाई पार्टीकै सदस्यको नामबाट पठाइएको थियो बम
कात्तिक ८, काठमाडौँ (एजेन्सी) | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आलोचकहरुको घरमा बुधवार पार्सलमार्फत बम पठाइएको खबर संसारभरी फैलिएको छ । मध्यावधि चुनावको मात्र दुई हप्ता अघि भएको यस घटनाक्रमप्रति विपक्षी डेमोक्रेट पार्टीले डर मानेका छन् ।
पार्सलको रुपमा पठाइएको बम पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा र बिल-हिलेरी क्लिंटन सहित ७ डेमोक्रेट्स नेताको घरमा पठाइएको थियो । खास कुरा के छ भने प्याकेजमा पार्सल पठाउनेले आफ्नो नामको ठाउँमा डेमोक्रेट पार्टीकै नेशनल कमिटीका पूर्व अध्यक्ष डेबी शुल्ज उल्लेख गरेको थियो ।
नक्कली नामबाट पठाइएको उक्त पार्सलको बिषयमा डेमोक्रेट नेता डेबीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । जानकारी अनुसार, प्याकेजमा उनको नामको स्पेलिङ गलत लेखिएको थियो । अमेरिकी अनुसन्धान एजेन्सी एफबीआईले बताए अनुसार पार्सल गरिएको एक पनि बम बिष्फोट भने भएन । तर, कयौंले यस घटनाको लागि राष्ट्रपति ट्रम्पलाई नै जिम्मेवार ठानेका छन् ।
मीडियामाथि हमला ठीक होइन: सीएनएन चीफ
नेताहरुको अलावा न्यूज च्यानल सीएनएनको कार्यालयमा पनि पार्सल बम पठाइएको थियो । यस बिषयमा सीएनएन वर्ल्डवाइड अध्यक्ष जेफ जकरले भने- “ट्रम्प र व्हाइट हाउसलाई यो कुरा कहिलै चेत आएन कि मीडिया माथि पटक-पटक उनको हमलाले खराब नतिजा पनि दिन सक्छ ।”
यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विस्कन्सिनमा एक र्यालीको दौरान दोषिलाई पक्राउ गर्ने र कडा सजाय दिने बताएका छन् । उनले मिडियामार्फत आफ्नो विरोध बन्द गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
कहाँ-कहाँ पठाइएको थियो पार्सल बम ?
संदिग्ध प्याकेज न्यूयोर्क, वॉशिंगटन र फ्लोरिडाको केहि क्षेत्रमा पठाइएको थियो । एफबीआईको अनुसार, जुन प्रमुख मानिसलाई बम पठाइएको थियो, उनीहरु मध्ये पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व विदेश मन्त्री हिलेरी क्लिंटन, सीआईएका पूर्व निर्देशक र सीएनएनसँग जोडिएका जोन ब्रेनन, पूर्व अटर्नी जनरल एरिक होल्डर, क्यालिफोर्नियाबाट डेमोक्रेट सांसद म्याक्सीन वाटर्स र लिबरल दानकर्ता र पूंजीपति जर्ज सोरोसलाई पार्सल बम पठाइएको थियो ।
सीएनएनको कार्यालयमा जुन पार्सल पठाइएको थियो, त्यसमा ब्रेननको नै नाम थियो । यसको अलावा पूर्व उप-राष्ट्रपति जो बिडेन के घरमा पठाइएको पार्सल भने अनुसन्धानकर्ताले घरमा पुग्नु अगावै रोकेको थियो ।
राजनीतिसँग किन जोडियो बमको कनेक्शन ?
हालसम्म जसको घरमा बम पठाइएको छ, उनीहरु सबै कुनै न कुनै मामिलामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको विवादमा परेका छन् । यसै कारण पनि बम घटनामा केहि डेमोक्रेट नेताहरुके ट्रम्पलाई जिम्मेवार मानेका छन् । ट्रम्पको समर्थकहरुको अनुसार बमको घटना डेमोक्रेटकै चाल रहेको बताएका छन्, किनकी उनीहरु मध्यावधि चुनावभन्दा अघि जनताको सहानुभूति पाउन चाहन्छन् । प्रहरीलाई हालसम्म संदिग्धहरुको बिरुध्ह कुनै जानकारी मिलेको छैन ।
पार्सलमा भेटियो पाइप बम
एफबीआईको आधिकारिक सूत्रको अनुसार, प्याकेजमा पाइप बम थियो । ओबामा र क्लिंटनको घरमा पठाइएको पार्सल खुफिया विभागले पुग्नु अगावै आफ्नो कब्जामा लिएको थियो ।